Contact Us - Gold Sanon International Co., Ltd.
Chief, Section Export 1 (Asia zeemarike kunye namanye amazwe)
Inombolo Yomnxeba: + 86-022-58658800
Chief, iCandelo Export 2 (India kunye Middle East Area)
Chief, Section Export 3 (Russia, Kazakhstan, Uzbekistan)
Chief, iCandelo Export 4 (South Korea, Singapore, Australia)
Chief, Section Export 5 (Ecuador kunye Vietnam)
Oku responsibale onelanga kwimarike yamazwe ngamazwe, intloko yentengiso, kwiminyaka 5 kushishino kumbhobho, iiyure ezingama-24 inkonzo yonke ndwendwe, umxhasi, ukunika izibonelelo zorhwebo kunye Inkcukacha.
Ndazalwa ndaza ndakhulela e Tianjin. kweminyaka 8 nakho kwamanye amazwe. Ndiyavuya ukunxibelelana nabathengi. Yonwabela ukuba lijonge njengomhlobo kunye nabathengi bam nokubanceda ukusombulula iimfuno zabo eziphathekayo.
Ndazalelwa kwidolophu encinane kumantla China iziqu MINZU University eBeijing. Mna ndahlala kwaye wasebenza Beijing phambi kokuba kuthuthelwa Tianjin ukujoyina SANON Pipe. Ndibe kwentengiso kule minyaka mithathu idlulileyo, kwaye athande umsebenzi ukuthengisa umbhobho.
Ndazalelwa Tianjin, waphumelela kwiYunivesithi Yunnan waza wabuyela Tianjin bangene SANON Pipe. Ndakhe ndaya kwiintengiso iminyaka emibini, ndingathanda ukuba ukusombulula ingxaki abaxhasi 'wokuthenga.
Ndazalelwa Shijiazhuang City, kwiPhondo Hebei, saya kwikholeji Baoding City. Ndaza ndafunda 2D emva kokuba ukusebenza kunye levidiyo. Kwaye usebenze kwishishini ngentsimbi ye iminyaka emi-3. Ndivuya kakhulu ukuba angene usapho Sanon International.